Sida qaabka lafta fardaha loo sameeyo | Fardaha Noti
Qaab dhismeedka lafta faraska
Jenny monge | | Fardaha fardaha
Iyada oo ay sabab u tahay horumarka qaab dhismeedka lafta fardaha Waxaa jiray xoogaa isbeddelo ah. Isbeddeladan waxaa badanaa lagu arkaa xagjirkooda, taas oo keeneysa in faraha laga dhigo oo kaliya mid ku hareeraysan walxaha geeska leh ee loo yaqaan koofiyadda ama dhalada.
Qeybaha hore, ulna iyo radius ayaa ku soo biiray, iyagoo keenaya hal laf, isla sidaas oo kale ayaa ku dhacday tibia iyo fibula, taasoo ka hortageysa in gacmaha iyo cagaha loo weecdo dhanka dambe.
Hada lafihii madaxyada farduhu way dheer yihiin waxayna leeyihiin waji dhererkiisu yahay laba dhakada. Daanka sidoo kale waa la dheereeyay, oo leh dhul ballaadhan oo fidsan oo ku yaal qaybta hoose ee aagga dambe.
Farduhu waxay leeyihiin ugu yaraan 36 ilig oo 12 ka mid ahi ay yihiin meerto, 24na ay yihiin malar. Xudunta laf-dhabartaadu waxay ka kooban tahay 51 laf-dhabarta.
Qalfoofka faraska wuxuu ka kooban yahay 210 lafood, Qalfoofkani wuxuu buuxiyaa shaqada ahaanshaha taageerada muruqyada, ilaalinta xubnaha gudaha iyo u oggolaanshaha dhaqdhaqaaqa si ay u xakamayso xawaaraha kala duwan.
1 Abuuritaanka qalfoofka faraska
2 Adimaha faraska
3 Madaxa fardaha
4 Qoorta fardaha
5 Jirridda sinnaanta
Abuuritaanka qalfoofka faraska
Qalfoofka ayaa loo habeeyay si loo qanciyo shaqooyinka kala duwan.
Fardo, sida xayawaanka kale, way isbeddeleen taariikhda oo dhan, waa waxay tusinaysaa in qaab dhismeedka lafahaagu isbedelayay. Isbeddeladan waxaa badanaa lagu arkaa xaglaha sinnaanta, inkasta oo laga ogaado qaybaha kale ee qalfoofkooda.
Guryahooda iyo shaqooyinka ay bini aadamku u qabteen dartiis, farduhu waxay la kulmi karaan dhaawac muruq ama laf, sidaa darteed waxaa muhiim ah in la ogaado jirkaagu sida uu yahay iyo qaybaha ugu badan ee dhaawaca u nugul, si aad isaga ilaaliso Si fudud.
Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato isbeddelka laf-dhabarka ee sinnaanta, sii wad aqriska waxaan kuu sheegi doonnaa hoosta.
Jirka sinnaanta waxaa loo qaybiyaa: madaxa, luqunta, jirridda iyo xagjirnimada.
Wadar ahaan qalfoofka farduhu wuxuu ka kooban yahay ilaa 210 lafood lafdhabarkuna wuxuu ka kooban yahay 51 lafdhabarta. Xagga lafdhabarta, 7 waa afka ilmo-galeenka, 18 wadnaha, 6 lumbar iyo 15 caudal. Qalfoofku wuxuu leeyahay hawsha taageerida muruqyada, iyo sidoo kale ilaalinta xubnaha gudaha iyo u oggolaanshaha dhaqdhaqaaqa si ay u jaangooyaan xawaaraha kala duwan.
Xaqiiq layaab leh ayaa ah in qalfoofka farduhu uusan lahayn xinjir. Taabadalkeed, aagga hore ee lugta waxay kuxirantahay lafdhabarta muruqyada, muruqyada iyo seedaha.
Waxaan faallo ka bixinay in addimada ay soo mareen isbadaladii ugu waaweynaa, taasi waxay ku cadahay lugaha hore meesha ulna iyo radius waxay ku midoobeen hal laf. Waxaa la mid ah tibia iyo fibula. Xaaladda dambe, midowga lafahan ayaa ka hortagaya u sinnaanta inay gacmaha iyo cagaha u jeedin dhinaca dambe. Ka hadalka gacmaha iyo cagaha faraha ayaa lagu soo koobay hal mid oo ay ku wareegsan yihiin waxyaabo gees ah koofiyad ama dhalo.
Dhinacyada hore waa kuwa xambaara culeyska faraska badankiisa.
Madaxa waa mid ka mid ah qaybaha ugu cad cad fardaha sidoo kale waa qayb kale oo ka mid ah lafaha la beddelay. Hadda, lafaha ka kooban faraska madaxiisa ayaa aad u dheereeya waxayna leeyihiin waji dhererkiisu laba jeer ka hooseeyo lafaha madaxa. Daanka sidoo kale waa la dheereeyay, oo leh meel ballaadhan oo fidsan oo ku taal qaybta hoose ee aagga dambe.
Madaxa wuxuu ka kooban yahay:
Ternilla, taas oo ah aagga dhaadheer ee adag ee u dhexeeya indhaha.
Chamfer, qaybta dheer ee kubka ee xuduudda isha iyo dulalka sanka.
Dooxooyinka ama fossae ku meel gaar ah, waa labada niyad jab ee laga helo dhinac kasta oo sunnayaasha.
Barba, qayb ka mid ah geesaha bushimaha.
Belfos, bushimaha hoose. Waa aag aad xasaasi u ah.
Daamanka, Qaybta dambe ee daanka sinnaanta.
Afka, farduhu waxay leeyihiin ugu yaraan 36 ilig oo 12 ka mid ahi yihiin goosgoos, 24na ay yihiin gorgorro.
Qoorta maxalliga ah wuxuu leeyahay qaabka trapezoidal, oo leh saldhig khafiif ah oo ku yaal isgoyska oo leh madaxa oo sii ballaaranaya jirridda.
Qoorta waxay leedahay shaqo aad u muhiim ah tan iyo soo dhex gala dheelitirka isku dheellitirka.
Qaybta ay ku kulmaan maroodiyeyaashu waxay noqon karaan kuwo toosan, isku-dhafan ama isku-xirnaan ku xiran nooca sinnaanta. Xaqiiqda xiisaha leh ee ku saabsan manida ayaa ah inay ku badan yihiin ragga marka loo eego dumarka.
Ma aha oo keliya aagga ugu weyn ee anatomine ka, laakiin sidoo kale wuxuu siiyaa tayada qaar ama kuwa kale fardaha iyadoo kuxiran qaabkooda iyo xoqan.
Qaybta lafdhabarta laf-dhabarka ee ku habboon aagga engegga iyo dhabarka, iyo sidoo kale gobolka lumbar ee ku habboon dhammaadka dhabarka iyo bararka, waxaa laga yaabaa inay waxyeello soo gaarto maadaama ay tahay aagga salka loo dhigo.
Aagga wadajirka garabka ayaa sidoo kale si joogto ah ugu dhaawacmi kara jaakadaha boodaya.
Es Waxaa muhiim ah in wadaha uu si joogto ah u taabto aagga laf-dhabarka si loo qiimeeyo raaxo-darrada suurtagalka ah xoolaha dhexdiisa iyo in lagu daaweyn karo waqtiga.
Si looga fogaado dhaawac, fuushanuhu waa inuu iska ilaaliyaa inuu si toos ah u fuulo faraska isla marka ay ka baxaan xasiloonida, maadaama miisaan culus si lama filaan ah loo dul saaray.
Jirridu waxay u qaybsan tahay dhowr qaybood:
Cruz, aagga sare iyo muruqyada qoorta dhamaadka. Waa aaggan oo cabiraya dhererka fardaha.
Dib u laabo, waxay xaduud ku tahay iskutallaabta xagga hore, iyadoo dhinacyada dhinacyadeeda iyo lafdhabarta dambe.
Loin, aagga kilyaha.
Koox, Meesha ugu dambeysa ee dhabarka xadka dabada.
Daal, dhinacyada isweydaarsiga.
Cinchera, xuduudaha xagga hore kilkilooyinka iyo gadaasha dambe ee caloosha.
Garbaha ama garbaha, caloosha, ka hor inta aan la gaarin.
Sidaan aragno, qalfoofku wuu isbadalayay, laakiin waa maxay sababta isbedeladani? farduhu waxay is waafajinayaan inay qanciyaan shaqooyinka kala duwan.
Waa in maskaxda lagu hayaa in iyadoo kuxiran jinsiyadaha ay jiri karaan kala duwanaansho gaar ah meelaha qaar ee jirka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Fardo Noti » kuwa kale » Fardaha fardaha » Qaab dhismeedka lafta faraska
Waa sidee habka wareegga dhiigga ee faraska
Nooca faraska ugu fiican